Qormadaani waa Qalinka Cabdusalam Salwe (Akhri) – Radio Daljir
Qormadaani waa Qalinka Cabdusalam Salwe (Akhri)
Juunyo 23, 2021 12:23 g 0
Qof sheeganaya ahlu diinnimo oo indhihiisa iyo dhegihiisa ku arkaya kuna maqlaya in cadawgii 10 sano birta ku hayay miidda ummadda oo la soo qabqabtay, la baaray, la maxkamadeeyay lana xukumay, isaga ruuxiisana 24-ka saac dhulka ku dhex mara nabad iyo ilaalo la’aan baa minbar la soo istaagaya 50% iyo ka badan meelaha qaar Puntland amni kama jiro.
Kaaga darane dadkii arrinku khuseeyay ee ka daa oran lahaa ayaa ama kii yiraahda afka qabanaya sidii Alle iyo rasuulkiisa wax laga sheegay ama iska aamusaya iyaga oo ka baqaya wax aynan iyaguba aqoon.
Shaksiyaadka caynkaa ahi waxay leeyihiin taariikh. Mar walba waxay la eegtaan qorshohooda marka loogu mashquulka badan yahay.
1993-94 xilli xun ayay afgambi iyo colaad ka shaqeeyeen. Markii la soo afjarayna waa la cafiyay.
2006-dii bay misana is yiraahdeen hadday idiin bilatay iyadana waa la iska xakameeyay oo dadkoodii bay dib ugu soo biireen.
Maanta oo 2021 la marayo bay mar kale fakfakad yihiin oo Maama Khadija looga soo baaqayaa. Qiyaasaha saddex illaa lix bilood ayaanu is waraysan doonnaa InshaAllah iyagana. Dabcan sidii caadada ahayd bay cabbaar dadkooda dhinaca ka raaci doonaan illaa iyo ay arkaan isgooys kale oo ay ka baxaan.
Caqliyadda caynkaa ihi kama duwana tii Juxihii geedka birta kala dhacayay laanta uu isagu ku fadhiyay. War hooy ka daaya!
Xoriyadda dhabta ahi waa maskaxda.
FG: Qormadan waxay gaar utahay qoraaga, Daljir waxba kuma darin kama reebin.
Dowladda Maraykanka oo xirtay xarumo warbaahineed oo laga leeyahay dalka Iran